ओलीको स्थिर सरकारको अस्थिर मन्त्रिपरिषद्, २ वर्षमा १३ जना ‘आउट’, १२ जना भए ‘इन’ – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ फागुन ९ गते १३:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालपछि मुलुकले २ वर्षअघि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थिर सरकार पायो ।
निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतसहितको जनमत पाएको वामगठबन्धनले दुई तिहाईको सरकार बनायो । कम जनमत पाएको नेपाली कांग्रेस ५ वर्षका लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।
दुई वर्षअघिको फागुन ३ गते सरकार बन्दै गर्दा धेरैलाई लागेको थियो, अब सरकार ५ वर्षका लागि स्थायी भयो, अब काम फटाफट हुन्छ । विकासको गती बढ्छ, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्ती हट्छ र केपी ओलीले भनेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ यात्रामा मुलुक अगाडि बढ्छ ।
सरकारको २ वर्षे आयुलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने मुलुकले स्थिर सरकार होइन, स्थिर प्रधानमन्त्री मात्रै पायो । बाहिरबाट हेर्दा सरकार एउटै भए पनि मन्त्रीहरुको हेरफेरले विगतकै अस्थिर राजनीतिको अवस्थामा मुलुक छ भन्दा फरक पर्दैन् ।
२ वर्षअघिसम्म विकास भएन भन्नेका लागि पहिलो रेडिमेड जवाफ थियो, सरकार नै स्थिर छैन, ९ महिने सरकारले के गर्ने ? तर अहिले सरकार स्थिर त छ तर मन्त्रीहरु स्थिर नहुँदा काम हुन सकेको छैन ।
सरकार तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सडक दैनिक ६ किलोमिटर पिच भयो भन्छ । विकासको गतीमा मुलुक अगाडि बढ्यो भन्छ, तर हामी हिँड्ने राजधानीका सरकारको मुहार फेरिएको देखिन्न । न त प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो धुलो र धुँवामुक्त भएको छ ।
सरकारले मात्रै होइन, आलोचकले भने जस्तो मुलुक बर्बाद पनि भएको छैन । न त सरकारले भने जस्तो नेपालको विकास देखेर संसार नै चकित भएको छ । जे छ त्यो जनतालाई थाहा छ, भोगिरहेका छन् तर त्यो यथार्थ कसैले बताउन खोज्दैनन् । सबैले आ–आफ्नो स्वार्थमा मात्रै प्रोपोगान्डा मात्रै गरिरहेका छन् ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्ने गरेको राजधानीका खाल्डाखुल्डी अहिलेसम्म पनि पुरिएका छैनन् । न त सुशासन नै कायम भएको छ ।
अघिल्लो दिन सुशासनका ठूलो गफ दिनेहरु भोलिपल्टै घुस काण्डको आरोपमा राजीनमा दिइरहेका छन् । अघिल्लो दिन आफूले गरेका कामको ठूलो फेरिहस्त बयान गर्नेहरु भोलिपल्ट कार्यसम्पादन र मूल्यांकनका आधार भन्दै सरकारबाट निकालिएका छन् ।
सरकार भन्छ, हाम्रो काम देखेर विश्व चकित भयो, अनि भोलिपल्टै चित्त बुझ्दो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरु सरकारबाट निकालिन्छन् । यतिसम्म कि अघिल्लो दिन सरकारको राम्रो काम गरेको गर्यै गर्ने तर सञ्चारमाध्यमले पिटिक्कै नलेख्ने भन्दै गाली गर्ने प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट योजना आयोगको बैठकमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई एकैठाउँ राखेर फिटिक्कै काम भएन भन्दै चित्त दुखाउँछन् ।
अनि जनताले के पत्याउने, कुन पत्याउने ? दोधारमा छन् । सरकार बाहिर हुँदा ठूला गफ दिनेहरु पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि कुन दुनियाँमा छन अत्तोपत्तो नभए झैं शान्त बसिरहेका छन् । काम कति गरे, कसरी गरे भन्नेमा कसैसँग बहुमत प्राप्त सरकारले भन्न मिल्ने कुनै काम छैन ।
२ वर्षमा १३ जना पद गुम्यो
सरकार बनेको २ वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ जना सरकारबाट बाहिरिएका छन् । जसमा सबैभन्दा पहिले सरकार बनेको ५ महिनामै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ निकालिए । एक निजी विद्यालयको कार्यक्रममा बोली चिप्लिँदा उनको मन्त्री पद गुम्यो । उनको ठाउँमा भानुक्त ढकालले मन्त्रालय सम्हाले ।
सरकार २२ महिना पुग्दा सरकार आफले कार्यसम्पादन र मूल्यांकनका आधारमा फेल भएको भन्दै ६ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सरकारबाट बर्खास्तीमा परे । त्यसको ठाउँमा ६ मन्त्री र ३ नयाँ राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
बर्खास्तीमा पर्ने मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विस्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र उद्योगमन्त्री मातृका यादव हटाइए ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव पनि बर्खास्तीमा परे ।
त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपेन्द्र यादवलाई कानूनमन्त्री बनाइयो । र, केही समयमा उनले पनि राजीनामा बुझाएर हिँडे ।
कानूनमन्त्रालय सम्हालेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइयो । यादवले राजीनामा दिएपछि ढकाललाई नै कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
पछिल्लो समय फागुन ८ गते बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिए ।
यसबीचमा मुलुकले नराम्रो घटना बेहोर्यो, राम्रो काम गरिरहेका भनिएका पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई हेलिकप्टर दुर्घटनामा गुमायो ।
मन्त्रिपरिषदमा १२ जनाको इन्ट्री
सरकारबाट १३ जना बाहिरिँदा १२ जनाले मन्त्रिपरिषदमा इन्ट्री गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा पहिले शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल मन्त्री बने । रवीन्द्र अधिकारीको दुर्घटनामा निधन भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री बने ।
बर्खास्ती गरेपछि हृदयेश त्रिपाठी, पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट, वसन्त नेम्वाङ, रामेश्वर राय यादव, धनश्याम भुसाल मन्त्री बने । त्यस्तै, नवराज रावत, मोती दुगड र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्री बने । त्यसपछि कानून मन्त्रालयमा पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त भइन ।
बिहीबार गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी वसन्त नेम्वाङलाई दिइएको छ ।
यसरी हेर्दा २ वर्षको अवधिमा सरकार स्थिर देखिए पनि अधिकांश मन्त्रालय अस्थिर देखिएका छन् । हिजोका दिनमा ९ महिने सरकारका कारण काम गर्न पाएनौं भन्ने कर्मचारीहरु अहिले फेरि मन्त्री फेरिरहँदा काम गर्न गाह्रो भयो भन्न थालिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् मात्रै होइन ३ महिनाभन्दा बढी समय सभामुख बिहीन हुँदा पनि काम हुन सकेन । सभामुख चयनमा ढिलाइ गर्दा नेकपाकै कारण एक महिना जति संसद नै चल्न पाएन । कैयन विधेयकहरु त्यत्तिकै थन्किए ।
टेस्लाले कोरोना उपचारका लागि न्यू योर्कमा सयौ भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने
अमेरिकाले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि यस्ता कदमहरु चाल्यो
कोरोनाको कारण विश्वमा आर्थिक संकट सुरु, उकास्न २५ खर्ब अमेरिकी डलर चाहिने
भवानी राणाको सेल्फ क्वारेन्टाइनः घरै बसेर महासंघको काममा व्यस्त, भन्छिन्- शब्जी किन्न निस्कन्छु
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिक जोनसनमा कोरोना संक्रमण देखियो